Cindy Crawford & Rande Gerber Utyelelo $ 13.75M New York Nolita Igumbi - Indumasi
Eyona Indumasi UCindy Crawford kunye noRande Gerber bajonga i $ 13.75 yezigidi zeNew York
UCindy Crawford kunye noRande Gerber bajonga i $ 13.75 yezigidi zeNew York
UCindy Crawford noRande Gerber bazingela izindlu eNew York.Imifanekiso kaLeon Bennett / Getty yeSwekile Ray Leonard Foundation
USupermodel Cindy Crawford kunye nomyeni wakhe, umsunguli weCasamigos uRande Gerber, bacinga ngokuthenga enkulu eNew York. UCrawford noGerber bebezingela izindlu edolophini, ngokuka Iposi iNew York , kwaye kutshanje bandwendwele ikhondomu enexabiso eNolita.
I-duo ikhangele igumbi lokulala ezine, iyunithi yokuhlambela eyi-4.5 e-152 Elizabeth Street, okwangoku kwintengiso ye- $ 13.75 yezigidi, ngokwe Thumela . Yeyona ndlu ibiza kakhulu eshiyekileyo esakhiweni, nangona imeko yangoku iyimali efanelekileyo phantsi kwexabiso lodweliso lwangaphambili lwe- $ 15 yezigidi. UCrawford ayisiyiyo kuphela imodeli enomdla kwikhondomu; U-Bella Hadid waxelwa ukuba wakhenketha i-5.98 yezigidi zeerandi kumgangatho osezantsi ekuqaleni kuka-Okthobha.
BONA KWAKHO: Ikhaya likaLeonardo DiCaprio elalisakuba liLake Lake elithengiswe ngeedola eziyi-3.4 yezigidi
I-aerie yomgangatho opheleleyo uCrawford kunye noGerber bajonge kwizikwere zeenyawo ezingama-4,158, ke kukho indawo eyaneleyo yefam yonke, kubandakanya abantwana babo, iimodeli uKaia noPresley. Kukho indawo eninzi yefam yonke.UDANIEL LEAL-OLIVAS / AFP / Getty Izithombe
Isinyusi sangasese sikhokelela kwi-condo, kwaye kukho igalari yokungena kunye nelitye likaPietra Cardosa. Kukho i-oki yomgangatho kuyo yonke indawo, kuluhlu olwabiwe ngumthengisi weCompass uLeonard Steinberg, uDebra LaChance kunye noDenise LaChance.
Isiko lokutya ekhitshini lixhotyiswe ngezinto zentsimbi ezingenagwele zeGaggenau, izixhobo zase-Italiyali zegumbi lekhabhathi, iikhawuntara zeemabhile ezihonjisiweyo kunye nendawo yokubaleka yesiqithi, nesihlalo sakusasa. Kukho i-loggia encinci ekhitshini, enokubakho umzuzu wokutya we-al fresco.
Igumbi elikhulu elikhulu lenziwe yenye indawo yokutyela enegumbi elikhulu kunye nendawo yokuhlala enkulu, enendawo yokubasa igesi ebiyelwe ngamatye.
I-airy master suite ineendawo ezimbini zokuhamba ezinkulu ngaphakathi kunye negumbi lokuhlambela elikhulu lemarble elinamampunge amhlophe aphindwe kabini, izibuko zeglasi ebonakalayo kunye nezixhobo zentsimbi ezingenasici.
UCrawford kunye noGerber bebesebenza kwimarike yokuthengisa izindlu nentshona yoNxweme oluseNtshona kule minyaka imbalwa idlulileyo, kodwa khange benze manyathelo okuhamba kwi-East Coast. Benza, nangona kunjalo, kutsha nje bafumana i-5.4 yezigidi zeerandi yokubuyela entlango eLa Quinta, kwakuloo ndawo inye apho uKylie Jenner naye enepropathi.
Le Nick Nolte Comedy Malunga ne-Alzheimer's Is Imnandi njengeCan Canal ngaphandle kweAnesthesia
UAriana Grande wayenamagama athile okhetho malunga noMfanekiso weWax wakhe ophazamisayo
I-Zero Stars: 'iTheminali' yimpazamo engabonakaliyo kuMargot Robbie
Ngaphambi kokuba Uzibumbele xa usifa, cinga ngoku
upopu omncinci hbo iphambili
Eyona webhusayithi ilungileyo yokuhlangana
Revers inombolo yefowuni jonga phezulu
amaphepha amhlophe aphendulela ukujonga nj